ADY KARIERAM-BOLAMENA ANY BETSIAKA : Vehivavy vao teraka maty notifirin’ny jiolahy
Ahiana ho disadisa nateraky ny fialonana no nahafaty ny renim-pianakaviana iray vao tera-bao iray volana monja tany Betsiaka-Ambilobe. 11 janvier 2017
Afak’omaly alina no nisy nanafika tao an-trano fonenany ity farany sy ny fianakaviana, ka izy no avy hatrany dia niantefan’ny balan’ireo olon-dratsy.
Araka ny vaovao voaray dia nisy olana teo amin’ny lefitry ny Ben’ny tanàna tao an-toerana sy ny fianakaviana iray. Voalaza fa nahita toerana nisy volamena ity farany, rehefa ren’ilay lefitry ny Ben’ny tanàna izany dia tsy nanaiky lembenana izy fa nampiasa ny fahefany avy hatrany. Nanatona an’ilay fianakaviany ny tenany, nanao teny fandrahonana ary nangataka mba hahazo ampahany amin’io volamena io na hanome azy vola fa raha tsy izany dia tsy maintsy haniraka olona hanafika azy ireo. Noentin’ny tahotra ilay fianakaviana nanoloana izany ka nanaiky ny nifampiraharaha taminy ary nanome lelavola mitentina roa hetsy Ariary ho azy.
Tsy fantatra anefa na tsy nahafa-po an’ingahy lefitry ny Ben’ny tanàna io vola io fa mbola niharan’ny fanafihana nataona andian’olona marobe ilay fianakaviana ny alin’ny alatsinainy lasa teo. Tonga dia nanao amboletra niditra an-keriny tao an-trano ireo mpanafika, tifitra variraraka no nataony vao tafiditra tao an-trano. Lavo tamin’io ilay vehivavy vao tera-bato nifana tao an-trano.
Miahiahy ny rehetra fa isany ho mpiray tsikombakomba tamin’ity fanafihana ity ilay lefitry ny Ben’ny tanàna. Hatramin’izao mantsy dia mbola tsy hita popoka izay nanjavonan’ity farany, raha ny vaovao voaray. Mbola miteraka resa-be hatrany ny fisian’ireo tera-tany sinoa manao fitrandrahana volamena ao Betsiaka-Ambilobe amin’izao. Iharan’ny kiana mahery vaika ny Ben’ny tanàna ho mpiray petsapetsa amin’ireo sinoa, araka ny vaovao voaray hatrany. Andrasana hatreto izay mety ho tohin’ity raharaha ity.